ShweMinThar: Introduction to HIIT
(Golden ticket to burn fat)
မေး ။ အဆီချဖို့ တစ်နေ့ ဘယ်လောက်ကြာကြာလုပ်ရမလဲ ???
ဖြေ ။ တစ်နေ့ မိနစ် ၂၀ထဲနဲ့ အဆီချနိုင်တယ်
ဒီလိုမျိုးပြောရင် တစ်ချို့က အံ့သြမယ့် သူတွေရှိသလို၊ မယုံသလိုလို ဖြစ်မယ့် သူတွေလဲ ရှိမယ်ထင်ထယ်။
ကြားဖူးသမျှ တစ်ချို့က Gym မှာ ၁နာရီလုပ်သလို၊ တစ်ချို့က ၂နာရီလုပ်ကြတာလဲရှိသည်။ တစ်ချို့ဆို ၃နာရီ လုပ်ရမလား လာမေးသူတွေတောင်ရှိသည် (ဟိုက်ရှားဘား)။
ဒါကလဲ အဆန်းတော့ မဟုတ်။ ကလေးဘ၀ထဲက တွေးနေကျ၊ အရိုးစွဲနေကျ သဘောတရားကို ကိုင်ပြီး ကြိုးစားနေတာကိုး။
" များလေ ကောင်းလေ" ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးက တစ်ခြားနေရာမှာ မှန်နိုင်ပေမယ့် အဆီချတဲ့နေရာ၊ ခန္ဓာကိုယ်လှအောင် ဆော့တဲ့ နေရာမျိုးမှာတော့ လုံးဝမမှန်ဘူးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ မမှန်ရုံတင်မဟုတ်၊ ရှောင်သင့်တဲ့ အရာဟု 100% ပင်ဆိုနိုင်သည်။
အဆီချဖို့တွေးလိုက်တိုင်း တစ်နာရီကြာ၊ နှစ်နာရီကြာ စသဖြင့်တွေးထင်ပြီး စိတ်ညစ်တတ်ကြတာမဆန်း။ ဒါ့ကြောင့်လဲ အခုတစ်ခေါက် Fitness လောကမှာ နောက်ဆုံးပေါ် ခေတ်စားပြီး တကယ်လဲ မှန်ကန်တဲ့ နည်းတစ်ခုကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
အားကစားပညာရပ်ဟာလဲ ခေတ်နဲ့အညီ နည်းသစ်နည်းမှန် တွေပေါ်လာလို့ တချို့နည်းဟောင်းတွေဟာ ထင်သလောက် မထိရောက်ကြောင်းကို သက်သေတွေလဲ ပြပြီးနေကြပါပြီ။ ဥပမာ ယခင်က ခေတ်စားတဲ့ Spot Reduction လို့ခေါ်တဲ့ တစ်နေရာထဲက အဆီကိုချခြင်း (အိပ်ထမတင်လုပ်ရင် ဗိုက်အဆီကျ၊ ထိုင်ထလုပ်ရင် ပေါင်အဆီကျ) နည်းဟာ မမှန်ကန်ကြောင်းကို သက်သေပြပြီးသလိုပေါ့။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ နောင်အပတ် စာစဉ်တွေမှာ ဆက်ရှင်းပြပါမယ်။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ အချိန်တို မိနစ်၂၀ ခန့် နည်းမှန်လုပ်ခြင်းဟာ တစ်နာရီလုပ်ခြင်းထက် ပိုအဆီကျမြန်ကြောင်း၊ ဘယ်လိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြောကြတာပေါ့။
ဒီနည်းကို HIIT လို့ခေါ်ပြီး အရှည်ကတော့ Highly Intensive Interval Training လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အနီးစပ်ဆုံး ဘာသာပြန်ရင်တော့ အချိန်တို အတွင်းမှာ အပြင်းအထန်လုပ်လိုက်၊ အရှိန်လျှော့ချလိုက် လုပ်နည်းလို့ အလွယ်ဘာသာ ပြန်နိုင်ပါတယ်။
ယခင်အဆီချနည်းတွေဖြစ်တဲ့ ဖြေးဖြေးမှန်မှန် ပြေးစက်ပေါ်မှာ ပြေးတာနဲ့ HIIT နည်းကိုသုံးပြီး အပြင်းအထန်ပြေးလိုက်၊ အရှိန်လျှော့ချလိုက် ပြေးတာနဲ့ ကွာခြားချက်တွေထဲမှာ ရရှိလာနိုင်တဲ့ ရလဒ်ကလဲ မတူပါဘူး။ မာရသွန်ပြေးသူနဲ့ တာတို အရှိန်မြှင့်ပြေးသူ၊ ဒီနှစ်ဦးကြားက ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ပုံ မတူသလိုပါပဲ။
မာရသွန်ပြေးသလို ခပ်နှေးနှေးနဲ့ အချိန်ရှည် ပြေးခြင်းမျိုးဟာ အဆီရော၊ ကြွက်သားကိုပါ ကျစေနိုင်ပေမယ့် HIIT နည်းနဲ့ အရှိန်မြင့် ပြေးခြင်းဟာတော့ အချိန်တိုပဲ လုပ်တာမလို့ ကြွက်သားထိန်းထားနိုင်မှုကို အထောက်အကူပြုပါတယ်။
မာရသွန်ပြေးသူတွေ၊ အေရိုးဗစ်အပျော့စား လုပ်သူတွေဟာ ပျော့ဖတ်ဖတ်ပုံပေါ်တတ်ကြတာမလို့ ဒီလိုကြွက်သားကျမသွားအောင် အလေးဆော့သူတွေက အဆီချချင်တဲ့အခါ HIIT နည်းကို သုံးကြတာပါပဲ။
ဘာ့ကြောင့် HIIT နည်းက အချိန်တို အတွင်းမှာ အဆီကျဖို့ ပိုထိရောက်သလဲ ??
After burn effect -
ပြေးစက်မှာ ပြေးတဲ့ အခါမှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ စက်ဘီးနင်းတဲ့ အခါမှာ ဖြစ်ဖြစ် Calories ဘယ်လောက် ကုန်သွားတယ်ဆိုတဲ့ ကိန်းဂဏန်းကို ကြည့်တတ်ကြတယ်မလား။ Calories (စွမ်းအင်) များများကုန်လေ၊ အဆီပိုကျလေလို့ ဆိုကြတာကိုး။ ဒါဆို ယခင်နည်းဟောင်းနဲ့၊ HIIT နည်းနဲ့ ၂မျိုးမှာ ဘာတွေကွာကြသလဲ။
-ယခင်နည်းဟောင်း (ပုံမှန် ဖြေးဖြေးမှန်မှန်အရှိန်နဲ့ ကြာကြာလုပ်ခြင်း)
ဒီလိုမျိုး ပုံမှန်လေး ကြာကြာပြေးခြင်းဟာ မိနစ် ၃၀အတွက်ဆို လူခန္ဓာကိုယ် အပိန်အ၀အပေါ် မူတည်ပြီး Calories 300 နဲ့ 400 ကြားကို အသုံးပြုပါတယ်။
-HIIT နည်း ( အပြင်းအထန်လုပ်လိုက်၊ အရှိန်လျှော့ချလိုက် လုပ်နည်း)
ဒီပြေးတာကိုပဲ ပုံမှန်အရှိန်နဲ့ ပြေးလိုက်၊ အရှိန်မြှင့်ပြီး အားသွန်ခွန်စိုက် ပြေးလိုက်၊ အရှိန်ပြန်လျှော့လိုက် နည်းနဲ့ ပြေးမယ်ဆိုရင် Calories 350၊ ဒါမှမဟုတ် တူတူဖြစ်တဲ့ 400 လောက် အသုံးပြုမှာပါတယ်။
ဒီနှစ်ခုကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ပုံမှန်ဖြေးဖြေးမှန်မှန်နဲ့ ပြေးတာက ပိုထိရောက်သလို ဖြစ်နေပါရော။ ဒါနဲ့များ ဘာ့ကြောင့် HIIT နည်းဟာ အဆီကျဖို့ ပိုထိရောက်တယ် ဆိုကျသလဲ။
အမှန်တစ်ကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင် ပြေးတဲ့ ကာလအတွင်းမှာ အသုံးပြုတဲ့ Calorie 300 လောက်ဆိုတာ အဆီကျဖို့အတွက် သိပ်အထောက်အကူ ပြုတာမဟုတ်ပါဘူး။ သင် ကြိုးစားနေတာ ဒီ Calorie 300 သုံးလိုက်ဖို့ ကြိုးစားနေတာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
Calorie 300 ကို Gym မှာ သုံးလိုက်လို့ ဘာထူးသွားမလဲ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီး အချိုရည် တစ်ဘူးလောက် သောက်လိုက်ရင် ခုနက ပြေးထားတာရဲ့ 75% လောက် ဗိုက်ထဲ ပြန်ဝင်သွားပြီ မဟုတ်လား။
ဒီတော့ အဆီချဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့လူ၊ သင်လိုအပ်တာက ပြေးနေတုန်းကျသွားတဲ့ Calorie 300 မဟုတ်ဘဲ ပြေးပြီးတဲ့ အခါ (အလေးမရင်လဲ အလေးမပြီးတဲ့အခါ) မှာ မြင့်တက်လာတဲ့ အစာခြေနှုန်း၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ဖြစ်စဉ် စတဲ့ အဆီကိုကျစေတဲ့ ဂယက်ကိုပဲ သင်လိုအပ်တာပါ။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီး ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ အဆီကုန်ဆုံးမှုဖြစ်စဉ်ပဲ ခေါ်ခေါ်၊ အစာခြေဖျက်နှုန်းတိုးလာမှုပဲ ခေါ်ခေါ်၊ ဒီလို ဂယက်တွေကို After burn effect လို့ခေါ်ပါတယ်။ အလွယ်ဆိုရရင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးတဲ့ အခါ ဗိုက်ထဲမှာ ဗိုက်ဆာတာမို့ ပူသလိုလို ခံစားရတယ်မလား။ အစာစားလိုက်ပြီးရင်တောင် သိပ်မကြာလိုက်ပဲ နောက်တစ်ခေါက်ဗိုက်ဆာသလို ပူနေတယ် ခံစားရတာဟာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်အပြီး ကျန်ခဲ့တဲ့ ဂယက်တွေပါပဲ။
ဒီလို ဂယက်တွေ အချိန်ကြာလေ၊ အဆီကျနှုန်းမြန်လေလို့ ပြောရင်မမှားပါဘူး။ ယခင် ဖြေးဖြေးမှန်မှန်ပြေးနည်းနဲ့ ပြေးရင် ဒီလို After burn effect ဟာ နာရီအနည်းငယ်(၄နာရီကနေ ၆နာရီ)သာ ဂယက်ရှိပြီး HIIT နည်းနဲ့ ပြေးတဲ့သူတွေမှာတော့ ဒီလိုဂယက်ဟာ ၂၄ နာရီထိ ကြာတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကိုယ်အိပ်နေရင်တောင် ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အရှိန်နဲ့ ဆက်လက် အဆီချဖုိ့ (ခန္ဓာအတွင်းဖြစ်စဉ်) ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ ဆိုရမယ် မဟုတ်လား။ ဒါဟာ HIIT နည်းနံ လုပ်ခြင်းရဲ့ လက်ဆောင်ပါပဲ။
HIIT နည်းက ကောင်းမွန်တယ်ဆိုတာ သိပြီဆိုရင် HIIT နည်းနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်နိုင်သလဲ ???
HIIT နည်းဆိုတာ အပေါ်ကပြောသလို အရှိန်မြှင့်လိုက်၊ အရှိန်လျော့လိုက် နည်းပါပဲ။ အမှန်ကတော့ သဘောတရားတစ်ခုလုိ့ဆိုရင် ပိုမှန်ပါတယ်။ သူ့ရည်ရွယ်ချက်က နှလုံးခုံပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ရုတ်တရက် (5 seconds၊ 10 seconds) နှလုံးခုံမြန်အောင်လုပ်တာပါပဲ။ ဘယ်လောက်မြန်အောင်လဲဆိုရင် လူကိုမထိခိုက်စေမယ့် ပမာဏအထိလို့ဆိုရပါမယ်။ ပျမ်းမျှပြောရရင် ပြေးစက်တွေ၊ စက်ဘီးနင်းစက်တွေမှာ ပြလေ့ရှိတဲ့ Heart rate 100Bpm နဲ့ 150Bpm ကြားလောက်လုိ့ ပြောလုိ့ရပါတယ်။ အသက်ကြီးသွားလေ Heart rate နိမ့်နိမ့်မှာပဲဆော့သင့်လေ (ဥပမာ 100Bpm)ပါ။
နှလုံးခုန်အနှေးကနေ ရုတ်တရက် နှလုံးခုန် တဒင်္ဂမြန်အောင်လုပ်မယ်၊ မြန်နေတဲ့ ကာလကို တတ်နိုင်သလောက် ရအောင် ထိန်းထားမယ်။ ဒါဟာ HIIT နည်းရဲ့ သဘောတရားပါပဲ။ နားလည်လွယ်အောင် ပြေးတာလေးနဲ့ ဥပမာပေးပါမယ်။
နှလုံးခုန်အနှေး (ဖြေးဖြေးမှန်မှန်လေး စပြေးနေမယ်) ကနေ ရုတ်တရက် နှလုံးခုန် မြန်လာအောင် (အရှိန်မြှင့် အားသွန်ခွန်စိုက်) လုပ်မယ်။ မြန်နေတဲ့ ကာလကို (အရှိန်မြှင့်ပြေးနေတာကို ရသလောက် 10 seconds ဖြစ်ဖြစ်) ထိန်းထားမယ်။ 10 seconds ကြာ အရှိန်မြှင့်ပြေးနေတာ မောလာရင် အရှိန်ပြန်လျှော့ပြီး ဖြေးဖြေးမှန်မှန် ပြန်ပြေးမယ်။
- 30 seconds ဖြေးဖြေးမှန်မှန်
- 10 seconds အားသွန်ခွန်စိုက်
- 30 seconds အားသွန်ခွန်စိုက် ထပ်မပြေးနိုင်လို့ အရှိန်လျှော့ ဖြေးဖြေးမှန်မှန်
ဒီလို သဘောတရားပါပဲ။ 10 seconds တွေ၊ 30 seconds တွေကတော့ အတိအကျ လိုက်နာစရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ့် အခြေအနေနဲ့ သင့်တော်တဲ့ ပမာဏနဲ့လုပ်ပါ။ 30 seconds ဖြေးဖြေးလေး ပြန်ပြေးနေလို့ အမောသိပ်မပြေသေးဘူးဆိုရင်လဲ 50 seconds အရှိန်လေးလျှော့ပြီး ပြန်အမောဖြေလုိ့ရပါတယ်။
HIIT သဘောတရားနဲ့ ဘယ်လို လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်နိုင်လဲ ???
အရှိန်မြင့်လိုက်၊ နိမ့်လိုက် သဘောတရားနဲ့ လုပ်လို့ရတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ မြောက်မြားစွာရှိပါတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့ ပေးရရင်
ရေကူးခြင်း - ဖြေးဖြေးကူးလိုက်၊ အားသွန် အမြန်ကူးလိုက်
ဘောလုံးကန်ခြင်း - ပုံမှန် ပြေးလိုက်၊ လူနောက်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ် လူကျော်အောင် ပြေးတာ ဖြစ်ဖြစ် အားကုန် ပြေးလိုက်
Gym စက်ဘီး - ဖြေးဖြေးနင်းလိုက်၊ အားသွန် အရှိန်နဲ့ နင်းလိုက်
ကြိုးခုန်ခြင်း - ဖြေးဖြေးပုံမှန်ခုန်နေရင်းကနေ အရှိန်မြှင့် အားသွန်ခွန်စိုက် ခုန်ခြင်း
အဆီချ လေ့ကျင့်ခန်း Video တွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံတွေ လုပ်နေတာဟာ အရှိန်မြင့်နေတဲ့ သဘောနဲ့တူသလို ပုံစံ တစ်မျိုးနဲ့ တစ်မျိုးကြား လှုပ်ရွနားနေတာဟာလဲ အရှိန်လျှော့လိုက်တဲ့ သဘောနဲ့ တူပါတယ်။ လေ့ကျင်ခန်းလုပ်စဉ်မှာ နှလုံးခုန်နှုန်း (ကျန်းမာတဲ့ ဘောင်အတွင်းက) မြင့်တက်အောင် အနည်းငယ် အရှိန်မြှင့်လုပ်ပါ။
တခြား လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံတွေမှာလဲ ဒီသဘောတရားကို နားလည်သလောက် သုံးလို့ရပါတယ်။ အပေါ်ကဟာတွေကတော့ ဥပမာပေါ့။
HIIT ကို ဘယ်နရက်၊ ဘယ်လောက်လုပ်သင့်သလဲ ???
HIIT ဆိုတာ ဘာဆိုတာလဲသိပြီ၊ ဘယ်ဟာတွေမှာ ဒီနည်းကို သုံးလုိ့ရလဲ ဆိုတာလဲ သိပြီဆိုတော့ ဘယ်လောက်လုပ်သင့်သလဲ သိချင်နေပြီဟုတ်။
တစ်နေ့ မိနစ် ၂၀ နဲ့ အဆီချနိုင်တယ်ဆိုခဲ့တာမို့ ဒီနည်းကို သုံးရင် မိနစ်၂၀ နဲ့ လုံလောက်ပါတယ်။ မိနစ်၂၀နေလုိ့မှ ဟောဟဲ ဖြစ်မနေပဲ ဖလန်းဖလန်း ထနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ ပြင်းထန်မှု မလုံလောက်သေးလုိ့ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဖြေကတော့ မိနစ် ၂၀လောက်လုပ်ရင် လုံလောက်ပါတယ်။
HIIT ကို အလေးမသူတွေ အနေနဲ့ဆို အလေးမလို့ အပြီးမှာ အပိတ်လေ့ကျင့်ခန်းအနေနဲ့ ၁၀ မိနစ်ကနေ ၂၀မိနစ်ကြားအထိလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အလေး မ မ သူတွေအတွက်ကတော့ ဘယ်အချိန်လုပ်လုပ်သင့်တော်ပါတယ်။
တစ်ပတ်ကို ၃ရက်မှ ၄ရက်ကြား၊ ရက်ခြားလုပ်ရင် လုံလောက်ပါတယ်။
- HIIT ဆိုတာ နှေးလိုက် မြန်လိုက် လုပ်တဲ့ သဘောတရား
- ရည်ရွယ်ချက်က နှလုံးခုန် အနှေးကနေ အမြန်ကို ရောက်အောင် လုပ်ဖို့နဲ့ နှလုံးခုန်မြန်နေတဲ့ အချိန်ကို ရနိုင်သလောက် တောင့်ခံယူဖို့
- ဒီသဘောတရားနဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းများစွာ ရှိ
- အလေးမသူတွေ အနေနဲ့ အလေးမ အပြီးမှာ လုပ်က ပိုသင့်တော်
- အလေး မ မ သူတွေအနေနဲ့ ဘယ်အချိန်လုပ်လုပ် လုပ်နိုင်
- တစ်ခါလုပ် မိနစ် ၂၀၊ တစ်ပတ်မှာ ၃ရက် သို့မဟုတ် ၄ရက်ထိ လုပ်နိုင်
နောက်ဆုံး အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ အခုမှ အစလုပ်သူများအနေဖြင့် အရှိန်မြှင့်တင်တဲ့အခါမှာ တအားကြိုးစားပြီး မြှင့်မတင်ပါနဲ့။ မိမိရဲ့ Limit ကို မသိပဲ အရမ်းကာရော ပထမနေ့မှာ မြှင့်တင်ပါက အမောဖောက်တာ၊ မူးမေ့တာ၊ အန္တရယ် ရှိနိုင်တာမို့ Limit သိအောင် ဖြေးဖြေးခြင်းစမ်းပါ။ ကိုယ်မသိတဲ့ ပျဉ်ခင်းတစ်ချပ်ကို ခိုင်မခိုင် သိချင်ရင် ခြေဖျားထောက် စမ်းသလိုပေါ့။
အားလုံးပဲ တစ်နာရီ၊ နှစ်နာရီ လုပ်ပြီး အချိန်ကုန် လူပင်ပန်းဖြစ်မယ့် ဘ၀ကကျွတ်ပြီး မြန်မြန်မှန်မှန်နဲ့ အဆီကျနိုင်ပါစေ။
Posted by Alex Aung at 4:49 AM